Nidina an-dalambe hanohitra ny kolikolin’ny governemanta sy ny tsy fisian’ny servisy tsotra indrindra ny Irakiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Septambra 2015 4:44 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Türkçe, Français, 繁體中文, English
“Mangataka amin'ny gov't izahay hanafatra ombivavy beronono miisa 328 hanoloan'ireo ny parlemanta,” hoy ny siokan'i Hayder Al-Khoei, izay nizara ity marika notazonina tamin'ny fihetsiketsehana tao Iràka vao haingana ity. Ny ombivavy no misy ilaina azy kokoa, hoy izy nanampy.
Nidina an-dalamben'ny renivohitra Baghdad ny Irakiana sy ny tanàna maro hafa manerana ny firenena isaky ny Zoma nandritra ny enina herinandro ao anatin'ny tabataba hanoherana ny fielezan'ny kolikoly ataon'ny governemanta sy ny tsy fisian'ny servisy tsotra maro. Nanomboka izany rehefa leon'ny fahatapahan-jiro matetika ny Irakiana, ary mahatratra 50 degre Celsius ny hafanana.
Nahatratra ny faratampony ny fihetsiketsehana tamin'ny zoma 28 aogositra taorian'ny antso nataon'ny mpitari-pivavahana shiita Moqtada al-Sadr tamin'ny mpanaraka azy hanatevin-daharana ny hetsika miady amin'ny kolikoly. Nahabe fanantenana izany fitomboana izany, saingy vitsy kokoa ny olona nipoitra tamin'ny Zoma farany teo.
@HayderSH milaza fa mahita ‘fihenana miharihary’ eo amin'ny isa:
Fihenana miharihary eo amin'ny isan'ny mpanao fihetsiketsehana raha ampitahaina ny tamin'ny Zoma heriny ny hetsika androany tao Tahrir
Raha ny tatitra dia olona 15.000 no nanao fihetsiketsehana tamin'ny 28 aogositra tao an-drenivohitra Baghdad, sy ny tanandehibe maro hafa manerana ny firenena, indrindra fa ireo ao amin'ny faritany atsimo. Mitondra saina irakiana sy mitazona sora-baventy mitsikera ireo manampahefana sy politisiana mpanao kolikoly ny mpanao fihetsiketsehana, tahaka ny hoe ‘aiza ny volanay?’. Ny sasany mitondra jiro misy soratra hoe “sivily” ao anatiny; mitaky ny zony fototra ara-tsivily.
Hetsi-panoherana androany maraina tao amin'ny kianja Tahrir Baghdad
Hetsi-panoherana androany tao amin'ny kianja Tahrir [Baghdad – Iràka]
Mpanao fihetsiketsehana eo amin'ny Kianja Tahrir mandrehitra jiro mivaky hoe “sivily” miompana amin'ny fangatahan-dry zareo hananganana “firenena sivily”
Raha nanomboka tamin'ny zavatra kelikely, tahaka ny antso fanatsarana ny tsy fisian'ny herinjiro sy rano madio ao anatin'ny hafanana mihoatra ny 50 degre Celsius, ny fitakiana teo aloha dia efa mihamifandringodringotra izany amin'izao fotoana. Mandrisika ny Praiminisitra Haider al-Abadi ny mpanao fihetsiketsehana hitondra fepetra lehibe maromaro. Nahazo fanatsarana ny fitakiana voalohany raha niantso an'i Al-Abadi handray fepetra hanoherana ny kolikoly ara-politika tamin'ny 7 aogositra ny mpitari-pivavahana Shiita ny Grand Ayatollah Ali al-Sistani.
Ho setrin'izany, namolavola fepetra sy fanitsiana ara-politika ny minisitra, tahaka ny fanafoanana ny toerana ambony maro ao amin'ny governemanta, ny fanafoanana ny quotas [fametrahana isa mitovy] isam-pivavahana amin'ny resaka politika, ary ny fanafoanana ny kolikoly.
Nasongadin'ny PM Al-Abadi ny fepetra vaovao hanamafisana ny fomba fitondrana sy haminganana ny kolikoly: antso fanohanana avy amin'ny kabinetra sy ny parlemanta.
Manohana tsy misy mitsipaka ny fehezana voalohany amin'ny volavolam-panitsiana nataon'ny PM Al-Abadi ny Filankevitry ny Minisitra.
Na izany aza, praiminisitra lefitra telo sy minisitra vitsy ihany no noroahiny, ary nibaiko ny mpitandro ny filaminana izy hanamorana ny fahafahamiditra amin'ny Faritra Maitso ao Baghdad, mahatonga ny mpanao fihetsiketsehana ho very toky ary ho vonona kokoa. Tamin'ny 28 aogositra, tonga niaraka tamin'ny andiam-pepetra vaovao hiantohana ny “rariny ara-tsosialy” ny Praiminisitra.
Namoaka fepetra maromaro vaovao hanamafinsana ny rariny ara-tsosialy ny Praiminisitra Al-Abadi
Amin'ny fandrisihan'ny Shiita mpitondra fivavahana maro mandrisika ny mpanaraka azy hanatevin-daharana ny fihetsiketsehana, dia nahazo lanja bebe kokoa ny hetsika. Tao amin'ny kabary nivoaka tele tamin'ny 24 aogositra ny mpitondratenin'ny Al-Sadr no namaky fanambarana manao hoe:
“The Sadrist participants participants should merge with the other protesters in a single, national Iraqi crucible.”
“Manambara amin'ny vahoaka rehetra sy ny Sadrista manokana izahay amin'ny tokony handraisana anjara amin'ny hetsika amin'ny zoma izao ao Baghdad.”
“Ireo Sadrista mandray anjara dia tokony ho tafaharo amin'ny mpanao fihetsiketsehana hafa ho ao amin'ny Irakiana nasionaly iray tsy mivaky”
Na dia mety hahazo olona maro kokoa hanao fihetsiketsehana aza ny antso, dia misy ireo olona sasantsasany manontany ihany koa ny fanohanan'ny Al-Sadr, manondro ny anjara toerana politikany mpitarika antoko politika, ny hetsika Sadrista, ary manontany tena hoe nahoana izy no tsy manova ny rafitra politika avy ao anatiny.
Miangavy ny mpanohana azy ny Al-Sadr handray anjara amin'ny fihetsiketsehana rahampitso. Tsy tokony hiangavy ny manampahefana ao amin'ny governemanta avy aminy hiala tao koa ve izy?
Mahazo fanohanana maro ny mpanao fihetsiketsehana manohitra ny kolikoly ao amin'ny media sosialy tahaka ny Twitter sy ny Facebook.
Fihetsiketsehana manohitra ny kolikoly Baghdad. Tsy azo hozongozonina ny fanirian'ity vahoaka ity.
Manohy ny ohatra maha-te-hidera sy ny fanajany ireo olom-pirenena manao fihetsiketsehana ny mpitandro ny filaminan'i Baghdad.
Nampiaradia ny sonita sy ny shiita ny hetsika manohitra ny kolikoly, ary misy aza ny olona sasantsasany mitaky ny hanavaozana tanteraka ny politika sy ny fametrahana fanjakana lahika.
Ao Baghdad hetsi-panoherana anarivony manohitra ny kolikolin'ny governemanta. Tsy mila governemanta sonita, tsy mila governemanta shiita. Ekena ny fanjakana lahika!
Hamarino ihany koa ny tatitra mandeha avoakanay ao amin'ny Global Voices Checkdesk